Best bamboo carbon steel spice yokubeka-nkqo ezimbini-tier tableware yokugcina yokubeka yoMvelisi kunye Factory | Uqalo olude
I-bamboo yentsimbi yekhabhoni yentsimbi ethe nkqo-ethe nkqo kwi-tableware yokugcina i-rackware
Isibiyeli esishelufini senziwe ngentsimbi yekhabhoni, ekungekho lula ukurusa kuyo. Sisebenzisa imibhobho yentsimbi eyomeleleyo nezinzileyo. Umnyama nomhlophe unokutshizwa ngaphezulu. Iishelufu zenziwe ngoqalo olusemgangathweni ophezulu, izinto zendalo ezicocekileyo, ezempilo kunye nezokhuseleko, uzinzo oluphezulu, uyilo olungenamngxuma, akukho qokelela lamanzi, ukungena komoya kunye nokuxhathisa ukungunda.
Uyilo lulula, kulula ukucoca kunye nokufaka.
Ishelfu yamkela uyilo olwahlukileyo lweeshelfu ezimbini, ezinokubamba izinto ezininzi kunye nokwandisa ukusetyenziswa kwekhabethe kunye nendawo yokugcina ikhitshi.
Olu luyilo lulunge kakhulu ekhitshini lakho okanye kwikona yasekhaya, ukongeza indawo elula ngakumbi kunye nendawo efanelekileyo yokugcina. Yenza indawo yokugcina kwangoko apho uyifunayo. Ubungakanani betheyibhile yethu ilungile kwiikona zeekhabhathi ezininzi kunye neekhabhathi ekhayeni lakho.
Ukufakwa kulula, kuthatha kuphela imizuzu emihlanu ukulungelelanisa imingxunya kunye nokuqinisa izikrufu ezisibhozo.
Ubungakanani 375 * 200 * 212mm
Izinto eziphathekayo Uqalo + Ikhabhoni yentsimbi
Umbala IVarnish yeNdalo kunye neMibala + yentsimbi emhlophe yekhabhoni
Ubungakanani beCarton 525 * 448 * 445 mm
Iyalayisha 20PCS / CTN
Ubunzima bokuqala Malunga ne-2kg
Isetyenziswa ngokubanzi ekhitshini, ilunge kakhulu ekulungelelaniseni iibhotile zokunonga, iipleyiti, izitya, iikomityi kunye nezinye iiporcelain ezintle. Ingasetyenziselwa ukubeka izinto zokuthambisa kunye neencwadi kwigumbi lokulala. Ingasetyenziswa kwiiofisi, kwizifundo, kumagumbi okuhlambela nakwezinye iindawo. Kukulungele kakhulu ukusetyenziswa kwiikhawuntari, iidesika kunye neekhabhathi, kwaye kunokwenza indawo yokugcina eyongezelelweyo phantse naphi na. Iishelufa zethu zintle kwaye zilungile, unokugcina kwaye ubonise iisundries zakho. Uhlobo lwayo olulula luhombisa iikhabhathi zakho zasekhitshini kwaye longeza imeko eyomeleleyo yoyilo endlwini yakho.
Egqithileyo I-bamboo yentsimbi yekona yekona enxantathu yeshelfu yeshelisi yespice inokufakwa kwaye ifakwe
Okulandelayo: I-bamboo trapezoidal yamanqanaba amabini e-spice jar yokugcina indawo yokugcina ukutya ekhitshini
Isakhelo se-Bamboo isakhelo esimhlophe sentsimbi emhlophe ...
I-5-Tier Multipurpose Rack Display Shelf
Bamboo trapezoidal-maleko ezimbini spice ingqayi yokugcina ...
Iinjongo ezininzi ze-4-Tier Corner Shelf Bamboo
3-Tier Multipurpose leposi Ubude bethuba Organizer and St ...